Indima yeBushido kwiJapan yamanje
I-Bushido , okanye "indlela yeqhawe," ichazwa ngokuqhelekileyo njengemigaqo yokuziphatha kunye neyokuziphatha yamaSamamura . Ngokuqhelekileyo kuthathwa njengelitye lesiseko sesithethe saseJapan, bobabini baseJapane kunye nabangaphandle belizwe. Ziziphi izixhobo ze-bushido, zakha nini, kwaye zisetyenziswa njani kwiJapan yanamhlanje?
Imvelaphi engqubuzanayo yeConcept
Kunzima ukuthetha ngokuthe ngqo xa i-bushido iphuhlisiwe.
Ngokuqinisekileyo, ezininzi iingcamango ezisisiseko kwi-bushido - ukunyaniseka kwintsapho yakhe kunye nenkosi ye-feudal ( daimyo ), uzuko lobuqu, ubugorha kunye nobuchule kwimfazwe, kunye nenkalipho ebusweni bokufa-mhlawumbi kubalulekile kumaSamurai amaqhawe eminyaka.
Ngokuxhamla, abaphengululi baseYapan kunye nexesha eliphakathi bahlala bexosha ibhasi, kwaye bathi yizinto ezintsha ezivela kwi- Meiji ne- Showa eras. Okwangoku, abaphengululi abafunda i-Meiji neShowa eJapan baqondisa abafundi ukuba bafunde imbali yamandulo kunye nexesha elide ukuze bafunde okungakumbi ngemvelaphi ye-bushido.
Zomibini iinkampu kule ngxabano zichanekile, ngendlela. Igama elithi "bushido" kunye nabanye abafana nalo abazange bavuke de emva kokubuyiselwa kweMeiji- oko kukuthi, emva kweklasi yamamurayi yapheliswa. Akukho mfuneko ukujonga iindinyana zamandulo okanye zangexesha eliphakathi kwanoma yikuphi ukukhankanywa kwebhasido. Ngakolunye uhlangothi, njengoko kuchazwe ngentla, ezininzi zeengcamango ezibandakanya kwi-bushido zazikho kuluntu lwaseTokugawa .
Iziseko ezisisiseko ezifana nobukroti kunye nobuchule kwiimfazwe zibalulekile kubo bonke abanobuchule kuzo zonke iindawo ngamaxesha onke, ngokunokwenzeka ukuba, nokuba amaSamamura asekuqaleni ebudeni bexesha laseKamakura babeya kuthiwa loo mpawu ibalulekile.
Ukutshintsha kwemihla yamanje yeBushido
Ukukhokela kwiMfazwe yehlabathi yesiBini , kwaye kuyo yonke imfazwe, urhulumente waseJapan wanyusa i-ideology ebizwa ngokuba yi "imperial bushido" kubemi baseJapan.
Yagxininisa umoya wamajoni waseJapan, uzuko, ukuzidela, nokungaqiniseki, ukunyaniseka okungaqinisekanga kuhlanga nakukumlawuli.
Xa iJapan yaxhatshazwa yinkqantosi yaloo mfazwe, kwaye abantu abazange bavuke njengokuba bafunwa ngu-bushido wama-imperial baze balwe nomntu wokugqibela ekukhuseleni umbusi wabo, i-bushido ibonakala iphelile. Kwiminyaka emva kokulwa kwemfazwe, abambalwa abancinci belizwe abafa-basebenzise eli gama. Uninzi lwamaJapan lwaluhlaza ngenxa yokudibanisa, ukufa kunye nokugqithisa kweMfazwe Yehlabathi II.
Kwabonakala ngathi "indlela yamaSamamu" yayiphelile ngonaphakade. Nangona kunjalo, ukuqala ngasekupheleni kweminyaka yee-1970, uqoqosho lwaseYapan lwaqala ukugquma. Njengoko ilizwe likhulile libe linye lamandla amakhulu oqoqosho kwihlabathi kuma-1980, abantu baseJapan kunye nabangaphandle kwakhona baqala ukusebenzisa igama elithi "bushido." Ngaloo xesha, kwafika kubhekiselele kumsebenzi onzima kakhulu, ukunyaniseka kwinkampani eyasebenza kuyo, nokuzinikela kumgangatho kunye nokuchaneka njengophawu lozuko. Imibutho yeendaba ixelile ngolunye uhlobo lwe-company-man seppuku , elibizwa ngokuba yi- karoshi , apho abantu basebenza ngokusemthethweni ukuba bafe ngenxa yeenkampani zabo.
Ama-CEO entshonalanga nakwamanye amazwe ase-Asia aqala ukukhuthaza abasebenzi babo ukuba bafunde iincwadi ezinokuthi "i-bushido yenkampani," ezama ukuphindaphinda impumelelo yaseJapan.
Ibali leSamurai njengoko lisetyenziswe kwishishini, kunye ne- Sun Tzu ye- Art of War yaseChina, yaba ngabathengisi abahamba phambili kwi-self-help category.
Xa uqoqosho lwaseJapan luye lancipha kwi-stagflation kuma-1990s, intsingiselo yebhasido kwilizwe lequmrhu yashintsha kwakhona. Kwaqala ukubonakalisa ukuphendula kwabantu abanesibindi kunye nesimo sokunyuka kwezoqoqosho. Ngaphandle kweJapan, ukuxhaswa kwamashishini kunye nebhasido kwangoko kwaphela.
Nangona i-bushido yenkampani ifana nefestile, eli gama lihlala likhula rhoqo ngokumalunga nemidlalo eJapan. Abaqeqeshi be-baseball baseJapan babhekisela kubadlali babo njenge "Samurai," kunye neqela lebhola lebhola lebhola lebhola elibizwa ngokuba yi "Samurai Blue." Kwiinkomfa zenkampani, abaqeqeshi nabadlali bavame ukubiza i-bushido, echazwe ngoku njengomsebenzi onzima, ukudlala okufanelekileyo kunye nomoya wokulwa.
Mhlawumbi akukho ndawo i-bushido ekhankanywe ngokuphindaphindiweyo kunehlabathi lezobugcisa. Abasebenzi be-judo, i-kendo, kunye nezinye izinto zobuJapan zobugcisa bafundela into abayicinga njengemigaqo yamandulo ye-bushido njengenxalenye yesenzo sabo (okokuqala iinjongo zixhomekeka, ngokuqinisekileyo, njengoko kuchaziwe ngasentla). Abaculi bamarha abavela kwamanye amazwe abaya eJapan ukuba bafunde imidlalo yabo ngokuqhelekileyo bazinikele kwi-ahistoriki, kodwa ibonakala kakhulu, inguhlobo lwebhasido njengenzuzo yenkcubeko yaseJapane.
Bushido kunye neMpi
Ukusetyenziswa okugqithisileyo kwegama elithi bushido namhlanje lisemgangathweni wezempi zaseJapan, kunye neengxoxo zezopolitiko emkhosini. Abemi baseJapan baninzi abadlali be-pacifists, kwaye baxhomekeke ekusebenziseni i-rhetoric eyayikhokelela ilizwe labo kwimfazwe yehlabathi. Nangona kunjalo, njengoko amajoni aseJapan e-Self-Defense Forces aqhubela phambili ukuphanga kwelinye ilizwe, kunye nezopolitiko ezizimeleyo zibiza amandla okwandisa umkhosi, ixesha elithi bushido likhula ngokuphindaphindiweyo.
Ukunikezelwa kwimbali yekhulu lokugqibela, ukusetyenziswa kwezempi kwesi sigama esichaphazelayo kuphela kunokuphelisa ubudlelwane kunye namazwe angomakhelwane kuquka i-South Korea, i-China kunye ne-Philippines.
> Benesch, uOleg. Ukuvala iNdlela yeSamurai: Ubuzwe, i-Internationalism, neBushido kwiJapan yamaJapan , i-Oxford: i-Oxford University Press, ngo-2014.
UMarro, uNicolas. "Ukwakhiwa Kwegama LwaseJapane Lwamanje: Ukuthelekiswa kweBushido kunye neNcwadi yeTe," I-Monitor: Journal of International Studies , Vol.
17, Issue1 (Ubusika 2011).
> "Ukuhlaziywa kwangoku kweBushido," iwebhusayithi yeYunivesithi yakwa-Columbia, yafikelela ngo-Agasti 30, 2015.
Isikhokelo kwiMikhosi yeTyina yaseTshayina kunye nokukhangela iTiye yaseTshayina
Iincwadi ezilungileyo ngeFeng Shui
Imbali yeGamelan, Umculo we-Indonesian kunye noMdaniso
Imibala yeLanga elitsha laseNtshonalanga
EKorea kwi-Imperial Era kunye neJapan Occupation
Iingxowa ezili-11 kwiNkcubeko yamaShayina
Ukuvukela kweBhokisier kwiiKhathuthi zoHlelo
I-Joseon Dynasty eKorea
Kutheni i-Chinese Lily Flower iyabaluleke kangaka?
Isikhokelo soBumi besiTshayina
Imifanekiso kaMongameli uGerald Ford kaMongameli
Kuphi i-Mandarin Ethethayo?
I-Synstais yase Falstaff
Ungayifaka njani iPhepha ukuze Uyenze ixesha elide?
I-Hydrogen bomb i-Atomic bomb
Izinto Ezimangalisa Ngeencwadi Zeencwadi Ezigqwesileyo Ezigqwesileyo Zikarhulumente
Ngubani owavusa i-Emoticons kunye ne-Emoji?
Indlela yokuzalisa iSicelo esisisiseko kwiSikolo soBucala
Indlela iJedi Mind Trick isetyenziswe ngayo kwiinkwenkwezi zeenkwenkwezi
Amazwi ambalwa kunye nembali yeVolkswagen Touareg
I-St. John's College i-Annapolis Admissions
Incwadi yam B
Iingcaphuno ezivela kuBob Marley Iingoma kwiPolitiki kunye neNguqulelo
Ngaba I-Truck Yakho Yomoya Wecala?
Iinkcukacha zeNkwenkwezi zeNtshonalanga
Ixesha lexesha le-Ku Klux Klan
Imizekelo yoBuchule yeeVavanyo ezingavumelekanga kwiKlasi
Ukulungiselela Ukuqokelela Kwemihla Yomthi
Igolide neSiliva Pennies
Yiyiphi imfundo ekhethekileyo?
Ziziphi izinto eziqhelekileyo ezongezelelweyo?
Projekthi zeSayensi zeHalloween
Iimpapasho eziqhelekileyo zesiFrentshi
18 Iingqungquthela zaseKlasini zeKrisimesi